Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan Windows
Maqaalka uu kuu sheegayaa MPC vs VLC Media Player, taas oo ah mid ka fiican? Read More >>
Maqaalka uu kuu sheegayaa sida aad u dejisan media player VLC for Windows 7 habsami Read More >>
Phone Windows u noqday caan ah ka dib markii uu ku bilowday si gaabis ah. Windows media player qabtaan shaqo ee celcelis ahaan video files. Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaado ciyaaro nooc kasta oo videos iyo files audio, software lama Read More >>
Maqaalka uu kuu sheegayaa sida loo ciyaaro SopCast on VLC? Read More >>
Dadka isticmaala telefoonka daaqadaha waxaa jira siyaabo aad u fiican oo bilaash ah qaar ka mid ah in ay dib u kor xogta la micno ah in aad naftaada ku badbaadin karto madax xanuunka ka mid ah laga badiyay xogta muhiimka ah. Read More >>
Maqaalkani waxa aad sida loo gurmad oo dhan ama soo xulay xogta ka phone Android inay PC. Sheegayaa Read More >>
Sida loo Beddelaan QuickTime MOV in MP4 si fudud oo dhaqso ku Windows 8
Tutorial Tani waa tallaabo hagitaan talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loo badalo MOV (Quicktime) si MP4 30X dhakhso khasaara eber oo tayo leh la isticmaalayo Wondershare MOV (Quicktime) si Converter MP4 Windows 8 (Windows7 / XP / Vista ka mid ah) Read More >>
Bal aan eegno laba siyaabood iyo sidoo kale faa'iidooyin iyo disadvantages.It waxaan rejeyneynaa in aad awood u yeelan doonaan in la helo hab wanaagsan ee ku haboon baahidaada. Read More >>
xirmaan phone android in PC ilaa taageero iyo macluumaad howlan. phone android si fudud ayaa loogu xidhi karaa laptop inkastoo WiFi ama USB cable. Read More >>
Labada hababka leeyihiin wanaagsan iyo diidmo gaar ah ay, isticmaal mid ka mid ah kaas oo ku habboon oo aad looga baahan yahay kuwa ugu fiican. Read More >>
Wondershare TunesGo ka dhigayaa mid aad u fudud inaad maarayso xiriirrada, music, sawirada iyo xitaa videos on telefoonka. Read More >>
Waxaad ku wareejin kartaa xiriirada, sawiro, fariimaha, songs, videos ka iPhone in phone Windows la Wondershare MobileTrans. Read More >>
Haddii aad u baahan tahay in ay sawiro ka iPhone wareejiyo computer (Windows PC ama Mac), habka la mid tahay arrin. Waxa kaliya ee aad qaadataa xoogaa tallaabooyin ah si ay u soo bixi pictures ka iPhone. Read More >>
Ay ku adag tahay in MP4 gubanaya si DVD on Window 10? Haddii ay sidaas tahay, waxaad isticmaali kartaa MP4 a smart in DVD gubi for Windows 10 si aad shaqo taas loo sameeyo. Read More >>
Maqaalkani waxa loogu talagalay in lagu soo dejisan, rakibi iyo wada hadlaan qaababka bedelay carmallada DVD abuuray. Read More >>
Free Download Windows DVD kale Kan sameeyey dadka isticmaala guud ahaan si fudud loo abuuro filimada DVD iyaga u gaar ah u ciyaaro kombiyuutarka iyo TV. Read More >>
Iska akhriso maqaalkan si aad u hesho 10ka FREE oo ugu wanaagsan DVD abuuray. Waxaad isticmaali kartaa oo dhan oo iyaga ka mid ay si dhakhso ah gubi DVD. Read More >>
Hel DVD ah gaare wanaagsan ee Windows 10 si loogu badalo oo gubi kasta video inay DVD ee Windows 10 tayo sare leh, sida AVI, FLV, MOV, MKV, iyo Mpg iwm Read More >>
Ma waxaad doonaysaa gubi ugu fiican DVD daaqado 10? Halkan waxaa ku qoran liiska dhowr codsiyada DVD gubashadii caan ah in ay diyaar u yihiin Windows 10 users. Read More >>
Waxaad u baahan tahay nooca saxda ah ee barnaamijka gubashadii DVD daaqado, si ay CD-iyo DVD-yada lagu gubi doonaa qaab saxda ah. Marka la eego hoos ku qoran qaar ka mid ah DVD ugu sareeya barnaamijka daaqado gubanaya. Read More >>